Somali daily News – SAWIRRO: Barcelona oo caawa laga reebay Tartanka Champions League iyo natiijada kulamadii ugu danbeeyay
SAWIRRO: Barcelona oo caawa laga reebay Tartanka Champions League iyo natiijada kulamadii ugu danbeeyay
dr.yare April 13, 2016 0
(xamarweyne.com):-Waxaa gabi ahaanba ka soo afjaray wareega 8-ka ee tartanka hampions League markii caawa la ciyaaray labadii kulan ee ugu danbeysay waxana tartanka ka haray kooxda weyn ee loo saadaalinayay inay difaacan doonaan tartankaan ee Barcelona.
Barcelona caawa waxay iska hor imaadeen kooxda ay isku wadanka yihiin ee Atletico Madrid waxaana looga badiyay 2-0 , goolasha waxaa u saxiixay Atletico Madrid ciyqaaryahanka Antoine Griezmann daqiiqadii 36aad ee qeybtii hore.
Sidoo goolka labaad waxaa u saxiixay isla ciyaar yahankii hore ee Antoine Griezmann dhamaadka ciyaarta waxayna ahayd rigoore loo dhigay kooxdiisa, si kastaba celcelis ahaan waxay Atletico Madrid ku badisay 3-2 madaama lugtii hore barceona ku badisay 2-1.
Sidoo kale waxaa caawa wada ciyaaray kooxaha Benfica iyo Bayern Munich kuwaasoo ku kala baxay 2-2 waxaana sidaas u soo baxday kooxda Bayern Munich madaama ay lugtii hore ku soo badisay 1-0.
Dhanka kale xalay ayaa sidan lagu kala baxay
Halkaan waxaa ka soo baxay kooxaha Man city iyo Realmadirid, madaama lugtii hore ay ku dhamaatay ciyaartii Manchester City iyo Paris Saint Germain bar baro 2-2 ah sidaas daraadeed Man city oo hada badisay ayaa soo baxday.
Sidoo kale realmadirid waxaaa kulankii hore looga badiyay 2-0 laakiin xalay ayay 3-0 ku badiyeen waxaana u wada saxiixay Ronaldo.